KITRA ATY AFRIKA : Afaka mirotsaka ho filohan’ny CAF ihany i Ahmad Ahmad ?
Ny FIFA no tompon’ny teny farany mikasika ny fahafahan’ny filohan’ny CAF ankehitriny Ahmad Ahmad, raha hahazo hirotsaka ho kandida amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny CAF indray amin’ny 12 marsa ho avy izao any Rabat. 10 juin 2021
Tsiahivina fa nosazian’ny Komitin’ny Etika eo anivon’ny Federasiona iraisam-pirenena an’ ny baolina kitra na ny FIFA ity filohan’ny CAF ity ny 19 novambra 2020 lasa teo. Nilatsaka ny didy tamin’io fa tsy mahazo miandraikitra ny raharaha baolina kitra mandritra ny 05 taona, miampy onitra 832 tapitrisa Ariary (185 000 Euros), noho ny resaka fanodinkodinam-bola sy fanararaotam-pahefana niampangana azy izy.
Nampiakatra ny raharaha tany amin’ny ambaratongam-pahefana samihafa i Ahmad ka nahazo ny rariny ny tenany taty aoriana. Na izany aza nanapa-kevitra ny komity mpanatanteraka ao amin’ny CAF fa ny FIFA no tompon’ny teny farany amin’ny fahafahan’i Ahmad hilatsa-kofidiana na tsia amin’ny 12 marsa ho avy izao. Misy tsy fifanarahana mba tsy hilazana fivakisana araka ny fahitan’ny mpanara-baovao azy eo anivon’ny CAF. Marihina anefa fa efa nahazo alalana avy tamin’ny « commission de gouvernance » an’ny CAF i Ahmad amin’ny fifidianana ho filohan’ny CAF ho avy izao.
Tsiahivina fa i Ahmad no nitantana ny CAF sady filohany nanomboka ny 17 marsa 2017. Anisany fanovana nentiny tao anatin’izay efa-taona nitondrany ny CAF izay ny fampitomboana ho 24 ireo ekipam-pirenena miady ny ho tompondakan’i Afrika, raha 16 teo aloha sy ny fampidirana ny VAR (Video Assistant Referee), na ny fitsarana amin’ny alalan’ny video, amin’ny fitsarana lalao mandritra ny CAN, izay natomboka tany Ejipta tamin’ny CAN 2019.
Ny fampitomboana ny isan’ireo ekipa mpandray anjara io no nahatafiditra ny Barea ho isan’ny mpifaninana tamin’ny CAN ka nahatafakatra antsika teo amin’ny ampahaefa-dalana. Isan’ny fanovana nentin’i Ahmad koa ny fampitomboana ny vola fanampiana ny federasiona amin’ireo Firenena afrikana, hampiroboroboana ny kitra. Andrasana ny fanapahan-kevitry ny FIFA. Ny irariana dia ny hahafahan’ity teratany malagasy ity hirotsa-kofidiana ho filohan’ny CAF indray amin’ny 12 marsa ho avy izao.